i-injini ye ipetroli ipetroli yecassava chipper yuca slicing chipping umatshini wokuthengisa
I-chipper ye-cassava chipper isetyenziswa ikakhulu ukusika iingcambu zecassava entsha,ingcambu ye-lotus, izambane eliswiti, umdumba, iminqatha,ibhanana,tshabalalisa, I-lime kunye nezinye izixhobo ezingamakwinkqubo yeengcambu zaba ziichipsi.Ukuqina kweetshipsi kunokuhlengahlengiswa 3 ~ 15mm. Lo matshini wokukrola wamkela i-ejikelezayo ye-cutter entloko eneempawu zecandelo lokusika okusemgangathweni, nkqu nobungakanani kunye nobukhulu beesileyi, izicubu ezisikiweyo kwaye ungazonakalisi izicubu zefayibha,imveliso inokufumana i-1000 ~ 1500kg / h,iyaziwa kwimveliso yokulungisa ukutya kunye nomzi mveliso wemveliso wemichiza.
Kwiziqwengana zecassava zemveli zenza, icassava yenziwa iichipsi ngepeyinti, ukusika kwii-chunks ngesandla ,ukomisa phantsi okanye ecaleni kwendlela. Kuqikelelwa ukuba ngaphezulu kwe 80 Iipesenti zeengcambu zecassava ezintsha eziveliswe kwimakethi yaseAfrika zenziwa ngale ndlela.ithabatha i-labour eninzi.Umatshini wecassava chipper kufuneka ube sisixhobo esibalulekileyo sokulima kwakho.Ungaqokelela umdumba ngemizuzwana embalwa kunye neetshiphu zakho yomisa ngaphantsi kweeyure ezimbini, endaweni yeentsuku.
Iziqwenga ezincinci zecassava zoma ngokukhawuleza kwaye kumanqanaba omgangatho wokufuma omncinci we 13 Iipesenti.Iichiphu zecassava ezomileyo zingasetyenziselwa ukutya kunye nokwenza umgubo wecassava.Umatshini wokucoca i-yuca uhlala usisixhobo esifanelekileyo sokuguqula ikhampasi yakho ibe ngumgubo ongathengiswa ngamaxabiso okhuphiswano kwimarike..
Amanqaku eCassava Chipper
1.Isicelo esibanzi. Ilungele izixhobo ezahlukeneyo zeengcambu ezintsha.
2.Injini yombane kunye ne-petroli ,Injini yedizili inokukhethwa,dibana namazwe awahlukeneyo abaxumi.
3.Imveliso ephezulu yokusetyenziswa okuphantsi, yonga iindleko zabasebenzi, yonga ixesha, isibonelelo esiphezulu sezoqoqosho. Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwezorhwebo kwishishini.
4.Umatshini osetyenziswayo ngokulula wecassava chipping,iindleko ezincinci,Inkonzo elungileyo ethengiswayo emva kwentengiso kunye nezinye izinto ezinokugcinwa ixesha elide.Ihlala ixesha elide kwaye isebenzisa umshini we-cassava chipper wobomi.
5.Nikeza ngenkonzo ye-OEM, banokwenza ngokwendidi iintlobo ezahlukeneyo zomatshini we-yuca chipper.
Iiparamitha zobuGcisa boMatshini weCassva Chipping